“Pandaikura, dambudziko rakakura chaizvo randaifanira kukurira raiva rekuda vamwe vakomana. Ndaingofunga kuti zvinhu zvaizopera, asi nanhasi manzwiro iwayo achiri kundishayisa mufaro.”—David, 23.
Kutaura zvazviri, zvinodiwa naMwari zvinoshanda kuvanhu vose pasinei nekuti vane chido chekuita zveungochani here kana kuti havana. Chokwadi ndechekuti, munhu wose anofanira kuzvidzora kuti asaita zvinhu zvisingafadzi Mwari.—VaKorose 3:5.
Ehe. Vamwe vakararama panguva yevaKristu vekutanga ndizvo zvavakaita! Pashure pekunge Bhaibheri rataura kuti vanoita zveungochani havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari, rinozoti: “Vamwe venyu ndizvo zvamakanga makaita.”—1 VaKorinde 6:11.
Zvakangofanana nechero chido chingava nemunhu, anogona kusarudza kuti chido chacho chisakura mumwoyo make uye asaita maererano nacho. Sei? Bhaibheri rinoti: “Rambai muchifamba maererano nomudzimu uye hamuzomboiti zvinodiwa nenyama.”—VaGaratiya 5:16
David, ambotaurwa nezvake patangira nyaya ino akaona kuti izvi zvinoshanda—kunyanya paakazoudza vabereki vake vechiKristu nezvedambudziko rake. “Ndakanzwa sekuti ndakanga ndatura mutoro waindiremera, uye ndinofunga kuti kudai ndakakurumidza hangu kuvaudza ndingadai ndakanyatsonakidzwa nemazuva angu ekuyaruka.”
Pakupedzisira, tinonyatsofara patinoita zvinoenderana nezvinodiwa naJehovha. Tine chokwadi chekuti zvinodiwa naJehovha ‘zvakarurama, zvinoita kuti mwoyo ufare’, uye “kuzvichengeta kunounza mubayiro mukuru.”—Pisarema 19:8, 11.
Murume Hwani, Mudzimai Hwani